OLONA AVY ATY AN-DRENIVOHITRA AVOKOA FA NY ATI-DOHA NO MPONINA ANY AN-TOERANA
Mirongatra ny vaky trano any amin’iny Faritra Arivonimamo iny. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny Zandarimaria sy ny Polisy Nasionaly anefa dia tratra ireo mpanao ratsy amin’izao fotoana.
Araka ny fanazavan’ny Lt Tsaratiana Edgar, Komandin’ny Kompania Arivonimamo sy ny Kaomisera Razanakolona Mamison, dia teo amin’ny tokantrano miisa 04, izay tamin’ny toerana 04 samihafa no niharan’ny vaky trano ny Sabotsy 17 Septambra lasa teo.
Naharay antso efatra ireo mpitandro ny filaminana ireto. Tamin’izany no nahalalan’izy ireo fa voasambotry ny Fokonolona tao Andranomena ny iray tamin’ireo jiolahy ka efa saika matin’ny fitsaram-bahoaka. Nandritra izany fotoana izany kosa dia naka alika mpitsongo dia ny Zandary. Tetsy an-daniny kosa dia nanohy ny fanadiadiana sy nitarika ny roa lahy hafa mpangalatra kosa ny Polisy.
Araka ny fantatra dia olona avy aty an-drenivohitra avokoa ireto olona tonga manao asa ratsy any an-toerana, fa mponina ao Arivonimamo kosa ny tena ati-dohan’ny vaky trano.
Fantatra fa solosaina enti-tanana 02 sy peratra ary vola vitsivitsy no lasan’ireto mpangalatra tamin’ny fanafihana renim-pianakaviana iray tany an-toerana. Mbola naolan’ireto mpangalatra ihany koa moa ity renim-pianakaviana ity. Nandritra ny fanafihana no nahalatsahan’ny grenady iray teo an-tokontanin’ilay olona voatafika.
Mbola misy fito moa ny olona karohina mahakasika ity raharaha ity amin’izao fotoana izao.
Ireo mampihorohoron'ny mponina ao Arivonimamo amin'ny famakiana trano : Sary ZP
Ankoatra izay, dia jiolahy efatra mpamaky trano ihany koa no saron’ny zandary ao Ambatomirahavavy ny alahady 18 septambra lasa teo raha teo am-panafihana mpivarotra iray iny. Niantso vonjy ilay tompon-trano ka vetivety dia tonga ny zandary ary nanapoaka basy rehefa nahita ireo jiolahy. Dimy minitra monja dia voasambotra avokoa izy 04 dahy ireo. Hita teny amin’izy ireo ny sabatra sy famaky ary fitaovam-piadiana hafa saika hampiasain’izy ireo tamin’izany.
Izy efa-dahy mpamaky trano ao Ambatomirahavavy : Sary ZP